Maxkamad ku taal dalka Denmark oo xabsi ku xukuntay laba wiil oo walaalo ah (Dhageyso)
Denmark:-Maxkamad ku taal dalka Denmark ayaa waxaa ay xabsi kala duwan ku xukuntay laba wiil oo walaalo ah ka dib markii ay ciidanka nabadsgida ee dalkaas PET ay ku eedeeyeen in ay ku soo tababarteen gudaha dalka Soomaaliya waxaa lagu xukumay 6 sano iyo 2 sano oo xarig ah.
Xeerilaaliyaha Maxkamada ayaa ku eedeeyey laba wiil ee walaalaha ah in ay lacag ku kaalmeeyeen Ururka Al-Shabaab iyo in ay dalka Soomaaliya ku soo tababarteen waxaana ay wiilsha diideen dhamaan eedeyntii loo soo jeediyey .
Qareenka u doodaya labada wiil ee Soomaalida ah Finn Søgaard ayaa ku tilmaamay xukuna lagu riday labada wiil ee walaalaha ah mid ka fog cadaalada waxaana uu sheegay in uu racfaan ka qaadan doon xukunka .
Maxkamada ayaa waxaa ay ka dhacaday caasimada Labaad ee dalka Denmark Aarhus .Hooyada dhashay labada wiil Duniya Nuur Rooble ayaa VOA u sheegtay in labadeeda wiil aaney wax danbi ah galin waxayna ka warbixisay qaabka loo xiray labada wiil.
Hoos Ka Dhageyso Hooyada dhashay labada wiil ee maxkamad ku taal magaalada Aarhus